China Agaro oligosaccharide စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ HQG
Fujian Global Ocean ဇီဝနည်းပညာနည်းပညာ Agaro-oligosaccharide သည်အထူးဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည့် anti-oxidation, inflammation, anti-virus နှင့် colitis ကိုကာကွယ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းကိုသိပ္ပံနည်းကျပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်ယူထုတ်ယူသည်။ အရည်အသွေးသည်အမျိုးသားနှင့်ကိုက်ညီသည် နှင့်အီးယူစံ။ Fujian ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသမုဒ္ဒရာဇီဝနည်းပညာ Agaro-oligosaccharide သည် hydrolysis ပြီးနောက် ၂ မှ ၁၂ အထိပိုလီမာခြင်း (DP) နှင့်အတူ oligose အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် viscosity၊ ပျော်ဝင်မှုမြင့်မားခြင်း၊ မြင့်မားသောခဲယဉ်းမှုနှင့်မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုတို့ပါဝင်သည်။
အဏ္ဏဝါ polysaccharide တစ်မျိုးအနေနှင့်ပုံမှန် agar သည်မြင့်မားသော viscosity နှင့်ရေတွင်ပျော် ၀ င်မှုရှိသောကြောင့်စုပ်ယူရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်၎င်းကိုအလွန်အသုံးဝင်သည်။ သို့သော် agaro-oligosaccharise သည် degradation အားဖြင့်၎င်းသည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ functional oligosaccharides ၏ယေဘုယျလက္ခဏာများသာမကစွမ်းအားမြင့် anti-ကဲ့သို့သောဘုံ oligosaccharide ဖြင့်အစားထိုးမရနိုင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများလည်းရှိသည်။ ကင်ဆာ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှု၊ ရောင်ရမ်းခြင်းလှုပ်ရှားမှု၊ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ဓာတ်ခံအိုမင်းခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်၎င်းသည် oligosaccharides ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
1. အူလမ်းကြောင်း probiotics ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
Fujian Global Ocean Agaro-oligosaccharides သည် bifidobacterium နှင့် lactobacillus များကိုပွားများစေပြီးအကျိုးရှိသည့်ဘက်တီးရီးယားများ၏ကြီးထွားမှုကိုအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကာလတိုစေပြီး၊ ၎င်းသည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအင်ဇိုင်းများဖြင့်အစာခြေနိုင်စွမ်းကိုခုခံသည်။ အထက်ပိုင်းအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအင်ဇိုင်းတွေ ၂၄ နာရီကြာကုသပြီးနောက် oligosaccharides အားလုံးနီးပါးဟာ amylolytic အင်ဇိုင်းတွေကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အိမ်ရှင်၏အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှအစာမကြေနိုင်၊ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အူမကြီး၏ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ရှိနိုင်သည်။
2. Moisturize နှင့်အဖြူရောင်
Fujian Global Ocean oligosaccharides သည်ကောင်းမွန်သော hycoproscopicity ကိုပြသပြီး moisturising effect ကိုရရှိခဲ့သည်။
tyrosinase ၏ monophenolase နှင့် diphenolase တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုဟန့်တားရာတွင်၎င်း၏ထူးခြားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ၎င်းသည်အရေပြားတွင် melanin ဖြစ်ပေါ်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးကောင်းမွန်သော inhibitory activity ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအလှကုန်အဖြစ်ဖြူဖြူစေသောအရာအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
3. Anti- အကျိတ်နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတိုးမြှင့်
၎င်းသည်အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာနှင့်ဆီးအိမ်ကင်ဆာစသည့်အကျိတ်ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဟန့်တားခြင်း၊ prostagladin PGE2 ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးခြင်းနှင့်အကျိတ် necrosis factor TNF-α၏ထုတ်လွှတ်မှုကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်ကင်ဆာဆဲလ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးသည် ကင်ဆာဆဲလ်တွေ။
4. Bacteriostatic သက်ရောက်မှု
ကောင်းမွန်သောသဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်ခိုင်ခံ့သောဘက်တီးရီးယားနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ရောက်မှုရှိပြီးအာရုံစူးစိုက်မှု ၃.၁၁% အထိထိရောက်သောအခါဘက်တီးရီးယားကိုလိုနီများထုတ်လုပ်မှုကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကိုလတ်ဆတ်သောအရောင်ပြောင်းခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းများကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
ပါးစပ်ပြင်ဆင်မှုသည် cytotoxicity မရှိဘဲနာတာရှည်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးကုသနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဆစ်ကဲ့သို့သောနာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် NO (နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်အောက်ဆိုဒ်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော) ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းတားစီးပါသည်။
ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးများ - အင်ဇိုင်းဓါတ်ကိုဟိုက်ဒရောလစ် (oligosaccharide) ကိုရရှိရန်အင်ဇိုင်းဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ၁၅ ရက်ကြာစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်ကင်ဆာဆဲလ်များအပေါ် 64mg / kg oligosaccharide ၏တားစီးနှုန်းသည် ၄၈.၇% ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အသည်းကာကွယ်မှုမူးယစ်ဆေး - အလယ်အလတ်မော်လီကျူး agaro-oligosaccharide (ML) သည် SOD နှင့် GSH-PX တို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးအသည်းဒဏ်ရာကိုကောင်းစွာကာကွယ်ပေးသည်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆေးပညာ - Agaro-oligosaccharide သည် Angiogenesis ၏တားစီးမှုကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ endothelial ဆဲလ်များ၏ apoptosis မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် S အဆင့်ရှိဆဲလ်သံသရာကိုပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရောင်ရမ်းခြင်းဆေးဝါးများ - အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့သောနာတာရှည်ရောင်ရမ်းရောဂါများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း။
နို့ထွက်ပစ္စည်းများ: Agaro-oligosaccharide သည်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမှအစာမကြေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် bifidobacterium နှင့် lactobacillus ကဲ့သို့သောအကျိုးရှိသောဘက်တီးရီးယားများ၏ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အိမ်တွင်းအူလမ်းကြောင်းတွင်အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများကြီးထွားမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်၊ အိမ်ရှင်၏ကျန်းမာရေး။ ၎င်းသည် prebiotics အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Probiotics အပေါ် agar-oligosaccharides ၏တိုးတက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် pectin-oligosaccharides ထက်ပိုကောင်းသည်။
Agar-oligosaccharide သည်သဘာဝထိန်းသိမ်းမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကိုလတ်ဆတ်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးအရောင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်ဓာတ်တိုးခြင်းများကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။ Filling agent: Agar-oligosaccharides တွေကိုချိုမြိန်စွာနဲ့ဖြည့်စွက်ဆေးကြောနိုင်ပြီးအူလမ်းကြောင်းဘက်တီးရီးယားများကပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းမရှိသလိုအခြား oligosaccharides နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်ထူးခြားမှုရှိသည်။
ထည့်သွင်းထားသောပမာဏသည်အစာစုစုပေါင်းအလေးချိန်၏ ၀.၀၅% မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအရတီလာပီးယား၊ တောင်အမေရိကဖြူပုစွန်၊ ခရုခွံနှင့်ဂဏန်းကဲ့သို့သောငါးများ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအား၊ ရောဂါခုခံမှု၊ ကြီးထွားနှုန်းနှင့်ရှင်သန်နှုန်းမှာသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။ Agaro-oligosaccharide သည်သဘာဝအစာဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောသဘာဝပင်လယ်ရေမှော်မှထွက်လာပြီးအဆိပ်မရှိသော၊ အသုံးပြုရန်လည်းအန္တရာယ်ကင်းသည်။ ၎င်းသည်အခြားအလှကုန်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ သင့်လျော်သည်။ ထို့အပြင် oligosaccharide သည်ကြားခံသကြားဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင်ဟိုက်ဒြိုဂျစ်အုပ်စုများစွာမပါရှိပဲ၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆက်နွယ်မှုများဖြစ်ပေါ်ရန်ရေမော်လီကျူးများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, oligosaccharide ကောင်းသော hygroscopicity ရှိပါတယ်။ tyrosinase ဓာတ်တိုးမှုကိုဟန့်တားပေးပြီးအရေပြားအတွင်း Melanin ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလျှော့ချပြီးအရေပြားဖြူဖွေးစေသည်။
၅ ~ ၇
၅ ~ ၁၅
မှတ်ချက်။ ။ viscosity parameter သည် ၁၀၀ အောက် ၁.၅% ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ လက်ငင်းပျော်ဝင် Agar
နောက်တစ်ခု: Semi သန့်စင်ပြီး Carrageenan